Ukushintsha isithombe noma ukulungisa umphumela wokuvakashela umuntu wezinwele, kufaka phakathi i-shaved, akuyona inkinga. Ikakhulukazi uma kunesikhathi esanele salezi zinhloso. Kulesi simo, umbuzo wokuthi ungakhula kanjani i-bang uphinde uxazululwe kalula. Izinwele kubantu abaningi zikhula ngokushesha, ngakho ezinyangeni ezimbalwa nje kuphela, umphumela oyifunayo uyatholakala. Uma ukukhula kuhamba kancane, kudingeka uthintane nochwepheshe wezinwele, okungukuthi, i-trichologist. Uzokhetha ukwelashwa okudingekayo.
Enye into ukuthi izinguquko kufanele zenzeke ngesikhathi esifushane kakhulu. Enye yemibuzo engase iphakame nalokhu umbuzo wokuthi ungathuthukisa kanjani ngokushesha i-bang.
Kungenziwa ngokusebenzisa izindlela ezikhethekile, njengama-shampoos, masks, ama-balms. I-serums-professional activators eshibhile kakhulu, okukhuthaza ukukhula kwezinwele kungakwenza. Thenga konke okungcono lapho uchwepheshe ochwepheshe, ekusiza ukuthi unqume ukuthi ungakhula kanjani, uzokwazi ukukhetha kahle izidakamizwa ezinhlobonhlobo zezinwele, futhi ukhuthaze nezinto ezikhethekile zokuzivikela ezinomthelela onobungozi onobudlova onobuhle kuwo. Ukuqoqa umswakama, le mithi ngokungaqondile iphinde ikhuthaze ukukhula kwezinwele.
Ekuxazululeni inkinga yokukhulisa i-bang, izindlela ezidumile ezithandwayo zingasiza. Isibonelo, ukusebenzisa ezimpandeni ze-mask kusuka ku-anyanisi ijusi (ungakwazi nge-cognac), ingxube ye-castor ne- burdock amafutha. Kuyasiza futhi ukugcoba ikhanda ngalawa mafutha, hlambulula izinwele ezihlanziwe ngokukhipha, okulungiselelwe kusuka emaqabunga e-birch noma kumagatsha omjunipha.
Ngaphezu kwezidakamizwa ezisetshenziswa ngokuqondile ezinyaweni, kunconywa ukuba uthathe i-vitamin complex. Ngenxa yazo zonke lezi mathuluzi kanye nezinqubo, ukujikeleza kwegazi kuqiniswa, okusheshisa izinqubo ze-metabolic ezinhlakeni zezinwele.
Yonke le mibuzo ayakhathazeki ngabesifazane kuphela, kodwa futhi amadoda. Kodwa, uma inkinga yokukhulisa i-hairstyle ende kubo ayifanele njengabesifazane, khona-ke inkinga yokukhulisa umnsana kumfana inentshisekelo kwabaningi. Kumele ngithi zonke izeluleko ezifanayo zifanele lapha njengabesifazane. Umehluko kuphela ukuthi imikhiqizo yezithokozi ezithengwe ngale njongo kufanele ihloselwe amadoda noma izingane (kuye ngokuthi ubudala bomfana) futhi ziqukethe izingxenye ezidingekayo zezinwele zabo.
Uma kungenjalo, izincomo zifanayo. Ukunakekelwa ngobumnene, ukusetshenziswa kwezinto ezihlukahlukene, ezikhethiwe kahle, ukukhuthaza ukukhula nokuvikelwa kwezinwele, izimali, kokubili ezitholakalayo ukudayiswa, futhi abantu, ukuhlunga - kuzokwenza ngokushesha ukufeza umgomo wakho futhi bakhule ibanga lobude obudingekayo. Uzothola impela umphumela owawufuna ukuwubona njalo. Futhi ukunakekelwa okunye okulungile kuzovumela ukuvala kuze kube phakade umbuzo wokuthi ungakhula kanjani isikhashana ngesikhathi esifushane.
Okubaluleke kakhulu, ungakhohlwa ukuthi zonke izidakamizwa ozisebenzisayo kumele zihambisane nazo zonke izindinganiso zekhwalithi zamazwe nezamazwe ngamazwe. Lokhu kukuqinisekisa ukuthi umphumela osheshayo nonokwethenjelwa, kanye nekhanda elihle nelinemfashini.
An MBA: kulokho aphana ngakho ukuthi angaluthola kanjani
Amanzi kwezokwelapha: ukuthi kuyini, kanjani futhi kungani ukusebenzisa
Minerals yase-Poland: nomnotho wezwe
Ukuvuvukala ubuso ngemva kweminyaka engu-40: izimbangela, ukwelashwa